GW MKPỤRỤ Ibé akwụkwọ CUTTER S140/S170
A na-eji njikwa ihuenyo mmetụ aka 1.19 ″ tọọ ma gosipụta nha mpempe akwụkwọ, ịgụta ọnụ, mbelata ọsọ, ndakọrịta nnyefe, na ndị ọzọ. Njikwa ihuenyo mmetụ na-arụkọ ọrụ yana Siemens PLC.
3.The ngwa ngwa / ngwa ngwa ngwa belt na-achịkwa stepless ugboro Ntụgharị, nke na-akpaghị aka tracks mma ọsọ na-edozi belt ọsọ, nke mere na akwụkwọ nwere ike zuru okè overlapped.
4. Upper mma roller nwere British cutter usoro n'ụzọ dị irè belata ibu na mkpọtụ n'oge mpempe akwụkwọ, na ịgbatị ndụ nke cutter.A na-eji igwe anaghị agba nchara wee were mma na-agbado elu mma maka ịrụ ọrụ nke ọma, ọ na-enwekwa oke nguzozi n'oge ọ na-arụ ọrụ dị elu.
A na-eji ígwè nkedo kpụkọtara ọnụ na nkedo, wee hazie ya nke ọma, yana nkwụsi ike.
Emebere elu igwe na-arụ ọrụ na ahịrị mgbasawanye, a na-ejikwa cylinder chịkwaa nrụgide na mpịachi akwụkwọ nke ahụ rola.
A na-eji mma ịcha ihe nchara nchara pụrụ iche, nke nwere ogologo ndụ yana ngbanwe dị mfe nke agụba.A ga-emechi mkpuchi nchekwa na-akpaghị aka mgbe emepere mkpuchi nchekwa, na-ahụ maka nchekwa.
1. Ụdị ịkpụ Rotary agụba elu, edoziri agụba ala
2. arọ akwụkwọ 60-550 GSM
3..reel dayameta Oke 1800mm
4. Emechara obosara Oke 1400mm/1700mm
5. Mpempe akwụkwọ emechara- Ogologo Min.450-Max.1650 mm
6. Ọnụ.nke mpịakọta ịkpụ 2 mpịakọta
7. Ịcha ziri ezi ± 0.3mm
8. Max.speed nke ịkpụ 350 mbe / min
9. Max. igbubi ọsọ 300m/min
10.Delivery ikpo elu 1500mm
11. Ihe achọrọ nke ikuku ikuku 0.8MPa
12. Voltaji AC380V/220Vx50Hz
13. Isi moto ike: 11KW
13. Mpụta Ezigbo mmepụta na-adabere na ihe onwunwe, na ịdị arọ nke akwụkwọ ahụ, na usoro ọrụ ziri ezi
2. Sistemụ mkpọkọta nkewa na ihe mkpofu
3. Elu nkenke otu rotary mpempe akwụkwọ cutter
4. Sistemụ mmezi nke Squareness
5. Sistemụ mkpochapụ Static
6. Sistemụ Nfefe Akwụkwọ
7. Ịgụ akpaaka na ntinye ngwaọrụ
8. Sistemụ nnyefe na akpaaka jogger
9. Sistemụ ịnya ụgbọ ala
10. Sistemụ ịnya ụgbọ ala
11. moto nwere okpukpu abụọ decurler
12. Nchekwa ọgba aghara akpaaka
13. Nchekwa onwe-EPC (Njikwa mpempe akwụkwọ)
1) Oke Reel: 1800mm
2) Oke Reel obosara: 1400mm/1700mm
3) Obosara nkeji nkeji: 500mm
4) Isi nha: 3"6"12"
5) Ịnya ụgbọ ala: 3.5kw
6) Ogwe aka na-aga n'ihu ma ọ bụ azụ nke hydraulic na-ebugharị
7) Clip ogwe aka elu ma ọ bụ ala nke hydraulic na-ebugharị
8) Sistemụ breeki nke pneumatic
9) Mpịakọta ịgba egwu nwere ihe nkwado yiri ya
2. Middle Slitting Na Waste Edge Anakọta System
1）Style Adjustable slitting mma na iyuzucha tube maka mkpofu onu n'akụkụ abụọ
2) Top slitter mmezi elu ma ọ bụ ala, slitting obosara nwere ike gbanwee aka.
3) N'okpuru slitter The slitter bụ ofu, slitting obosara nwere ike gbanwee site ntuziaka.
4) Ịkwụsị ihe mkpofu ikuku: moto 1.5kw na-ebugharị
5) Ụdị-Y na-anakọta ọkpọkọ maka ọnụ ihe mkpofu
3. High nkenke otu rotary mpempe akwụkwọ cutter
1) Top Rotary Knife na-anabata ụzọ ịkpụ nke British, ka ibelata mkpọtụ na ibu na ogologo ndụ nke mma,
2） Ngwá ọrụ Ngwá Ọrụ Apron nkedo na oge, wee hazie ya, nwere njirimara nkwụsi ike.
3) Onye na-anya ụgbọ ala: elu ọka, nke ikuku na-achịkwa ka ọ jide akwụkwọ ahụ.
4. Sistemụ ngbanwe nke Squareness
1) Ụdị: Ngwá Ọrụ Apron edoziri dị ka ụzọ nke British, arụmọrụ karịa.
2) Ụzọ njikwa: Squareness nke akwụkwọ dị ka calibration site na nlele ndị ọrụ.
1) Ụdị: Ogwe mgbochi static, nwere ike iwepụ static na mpempe akwụkwọ.
1) Ụdị: Na-ebufe kehoraizin na multi-stage ka agụta na ikpokọta adaba (elu arụmọrụ uzuzu na-achịkọta equipments)
2）Nke mbu mbufe ozi Iji kewaa mpempe akwụkwọ ngwa ngwa
3) Usoro mbufe nke abụọ iji bufee akwụkwọ dị ka udi tile nwere ngwa ngwa ngwa ngwa, njikwa otu ma ọ bụ njikọ njikọ.
4） Ngwa mbufe nnyefe ngwaọrụ nkewa a nụchara anụcha nwere ike wusie nkwụsi ike ma gbanarị mwepu akwụkwọ.
7. Siemens PLC, INVT Servo Driver na moto, Schneider inverter, ihe ọkụ eletrik na-ebubata.
8. Ngụkọta akpaaka na ngwaọrụ ntinye akara
1) Ụdị: Fanye ma gụchaa nke ọma
A, Mgbe etinyere ọnụ ọgụgụ nke mpempe akwụkwọ na HMI,
mgbe ahụ, ọ nwere ike na-arụ ọrụ dị ka chọrọ.
B, Mejupụta ngwaahịa nwere nkwarụ
9. Nnyefe na Auto Jogger System
1） Ụdị: Na-agbadata na akpaghị aka mgbe akwụkwọ na-agbakọta ruo otu ịdị elu.
2) Ogologo akwụkwọ tojupụtara
3) Nha akwụkwọ emechara
4) Ibu nke Stacker
5） Jogger: Max.1500mm, W = 1400mm, L = 1450mm, 2500kg, Dynamic ụdị jogger maka ihu na n'akụkụ abụọ;adiustable ụdị tailgate.
10. Motorized abụọ decurler
Decurler a emebere ọhụrụ nwere ike mebie akwụkwọ ahụ siri ike
ya na nsonaazụ dị mma karịa decurler nkịtị
usoro, nke na-enyere igwe a aka ka ọ na-agba ọsọ
osisi ruo 1000gsm
11. Nchekwa onwe-EPC (Edge Akwụkwọ njikwa)
Nozzle nke ziri ezi nke dị mfe ma dị nro
Ngwa ngwa na-achọpụta ahịrị weebụ dị iche iche maka sistemụ EPC.
12. Nchekwa onwe-ụjọ
Tinye dayameta mpịakọta akwụkwọ na nọmba arọ akwụkwọ n'ime ihuenyo mmetụ ahụ, kọmputa ga-achịkwa esemokwu ahụ na-akpaghị aka.Foto maka sistemụ ntuziaka weebụ 4 mpịakọta.
13. Sistemụ ịnya ụgbọ ala
1) AC servo moto maka iweghachi agụba2) AC moto maka akwụkwọ ebufe3) Inverter moto maka eriri ebufe nke abụọ4) moto AC maka elu na ala nke Stacker5) AC moto maka n'ihu jogger6) moto AC maka igwe ikuku nke ikpokọta onu mkpofu7) AC moto maka nkwụnye nkwụsị
3. 2000mm ọnwụ ogologo
4. 1650mm ikpo elu
5. Mwepụ uzuzu
6. Nyocha cursor
7. Usoro nchekwa nchekwa na-agbachi agbachi na usoro nchekwa mkpọchi
1. HCT Agụba
6. Cursor nsochi
7. Nchekwa nchebe na-adịghị agwụ agwụ na usoro nchebe interlock
Ntụgharị ugboro ugboro
Gbanwee ọkụ ọkụ
S140 Precision Twin Sheeter Sheeter Layout
Nke gara aga: GUOWANG C-106Y NKE NKWỤKWỌ NKE NKWỤKWỌ NKE NKE NA-EKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWASỊ.
Osote: AKWỤKWỌ MMADỤ MMADỤ GW D150/D170/D190